Somaliland Murrashaxa Madaxweynaha Ee Xisbiga UCID Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay Ka Hadlay Arrimo Dhawr Ah - Wargane News
Home Somali News Somaliland Murrashaxa Madaxweynaha Ee Xisbiga UCID Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay...
Murashaxa Madaxweyne Ee Xisbiga Ucid Aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen oo safaroo kala duwan dalka kaga maqnaa ayaa saaka subaxnimadii hore dib ugu soo laabtay dalka .
Waxaana Murashaxa Madaarka Kaga hor tagay isla markaana ku soo dhaweeyay masuuliyiin ka tirsan Xisbiga Ucid .
Murashax Jamaal Cali Xuseen oo qolka nasashada Madaarka kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in uu isagoo nabad ah uu dib ugu soo laabto dalkiisi hooyo , waxaa uu sidoo kale ka hadlay xadhigii loo geystay Salaadiintii loo xidhxidhay arrinkii Lug-hayaa .
Sidoo kale Murashaxa ayaa Tacsi u diray Eehelaii iyo qaraabadii uu ka baxay Marxuum Maxamed C/raxman Gadhyare oo uu sheegay in ay saaxibo ahaayeen .
Ugu danbeentii wuxuu ka hadlay Ololihii ay Xisbiyada Kulmiye iyo Waddani ay ka sameeyeen Gobolka Awdal isagoo sheegay in aan la joogin wakhtigii ololaha waxaanu ku dhaliilay xisbiyadaasi in bulshadii oo abaareesan halkii ay caawin lahaayeen in ay bulshadii ay ku dul ciyaarayeen .
Sidoo kale wuxuu labada Xisbi ku eedeeyay in ay hantidii umadda ay u isticmaleen Ololahaasi isla markaana ay labadoodu yihiin labada Xisbi ee Dalka haysta , lana ogyahay ayuu yidhi halka ay dalka dhigeen Maanta
soo dhawaynti jamaal cali xuseen